Nosy Koh Sak. Pattaya. Thailand ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Pattaya » Таиланд » Asia » Eran-tany / Faritra » Nosy Koh Sak. Pattaya. Thailand
Nosy Koh Sak. Pattaya. Thailand
Fampijaliana ny nosy Koh Sak (Koh Sak). sary
Nosy Koh Sak. Pattaya
Koh Sakosy dia nosy kely iray misy endrika soavaly miendrika soavaly, izay miatrika mivadika mankany atsimo. Vavaky ny isa akaiky indrindra an'i Pattaya miaraka amin'i Lan sy Krok. Manodidina ny 7,5 km ny elanelan'ny Koh Sak ka hatramin'ny morontsirak'i Pattaya, manomboka any Koh Sak ka Koh Lana - 600 m fotsiny. Miorina ao amin'ny faritanin'i Chonburi i Koh Sak.
Manodidina ny 500 m eo ho eo ny halavan'ity nosy ity. Rakotra havoana i Koh Sak. Betsaka ny kirihitrala maniry eo. Ny havoana 2 avo indrindra dia 19 m ny haavony.
Misy torapasika 2 amin'ity nosy ity - any amin'ny faritra avaratra sy atsimo. Ny halavan'ny morontsiraka avaratra ao Koh Sak dia 250 m. Any amoron-drano io ary mety hilomano. Ny halavan'ny morontsiraka atsimo dia 80 m. Misy lalana eo amin'ny tora-pasika mankany amin'ny iray hafa. Ny fotodrafitrasa ao amin'ilay nosy dia novolavolaina kely. Ny trano fandraisam-bahiny tokana ihany.
Tsy misy fivarotana tokana eto amin'ity nosy ity, fa iray ihany ny kafe izay ahafahanao mihinana na misotro mihitsy aza.
Indray mandeha i Ko Sak dia toerana fialantsasatra manokana. Notsidihin'ny olo-malaza malaza maro izy, izay namela ny tongony sy ny tanany teo amin'ny manda. Anisan'ireny i Reza Pahlavi (Shah ao Iran), ny Duke of Edinburgh, ny filoham-pirenena amerikana maromaro, ny mpanjakan'i Thailand mihitsy, ny mpanamory an'i Buzz Aldrin sy i Neil Armstrong.
Fialamboly ao amin'ny nosy Koh Sak. Hanao inona
Famandrihana sy Snorkeling an'i Koh Sak
I Koh Sak dia mahaliana indrindra ho an'ireo tia ny filentanana sy ny snorkeling.
Ny mampiavaka ny endriky ny nosy dia mandray anjara amin'ny fahadiovana fa madio sy tony foana ny rano ao amin'ny sahan'ny.
Any amin'ny faritra atsimon'i Koh Sak dia misy ny haran-dranomasina, izay misy ny trondro samihafa, sokatra, kintana, ary alàka.
Snorkeling sy misitrika ao amin'ny nosy Koh Sak
Tsy misy matanjaka ao amin'ity toerana ity, ka avotra tanteraka ao anaty rano manakaiky ny harambato ity.
Mitsangantsangana amin'ny sambo kely eo amin'ny nosy Koh Sak. vidin'ny
Any andrefany, i Koh Saka dia azo asiana fanondrahana anaty rano kely-mini ary hankafy ny haran-dranomasina avy any amin'ny porthole. Manomboka ny vidin'ny fahafinaretana toy izany amin'ny 1 800 baht.
Sitraka kely tao amin'ny nosy Koh Sak. Pattaya
Sekoly fivarotana ao amin'ny Koh Sak
Betsaka koa ny sekoly fisitrana maivana ao amin'ny Koh Sak. izany hoe tsy hahazo mari-pahaizana momba ny làlana ianao fa hahita ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fikorisana sy fisakafoanana azo antoka
Famoronana rava anaty lavaka
Ny akaikin'ny morontsiraka atsinanana, dia nalentin'ny Royal Thai Navy tamin'ny volana septambra 2006, ny HTMS Kut, izay sahabo ho 30 m eo ho eo.
Ahoana ny fomba hidiran'ny Koh Sak Island
Mandeha haingana ny sambo Sakia avy any Pattaya Bali Hai.
Bali Hai marina ao amin'ny sari-tany - https: //goo.gl/maps/EftDT1maWu3QT7UY8
Adiresy - 439/15 Pattayasainueang, City Pattaya, Distrikan Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailand
Phone: + 91 99473 80044
Ny vidiny dia ahitàna ny fivezivezena amin'ny boatin'ny speedboat izay misy olona miisa 10-15. Manodidina ny 1000 baht ny vidiny
Tsy misy paika tokana ao amin'ilay nosy mihitsy, ka mila miomana mando tongotrao alohan'ny hahatongavanao ny moron-dranomasin'i Koh Sak, rakotra fasika fotsy.
Torapasika amin'ny nosy Koh Sak
Avaratra - manana lavany 250 m Ao amin'ny faritaniny no hany kafe ao amin'ny nosy miaraka amin'ny sakafo Thai. Na dia eto aza ny masoandro dia manofa.
Torolàlana any avaratry ny Nosy Sak Sak
Raha mandeha mankany amin'ny morontsiraka atsimon'i Koh Saka ianao dia mila mandeha amin'ny lalana miampita ala ala kely fotsiny.
Atsimo - 80 m monja ny halavany Eto dia afangaro amin'ny fasika amin'ny habeny kely ny fasika.
Koh Sak Island amin'ny sarintany
Ny ankehitriny dia eo amin'ny nosy Koh Sak + vinavina
Eto ambany no ahitanao ny fiaran-toetran'ny toetrandro izay ahafahanao mahita ny toetr'andro ankehitriny ao amin'ny nosy Koh Sak ary ny toetr'andro toetr'andro mialoha ny telo andro. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny sosona tianao: alon-drano, rivotra, orana, rahona sy ny maro hafa.
Hevitra momba ny nosy Koh Sak. Pattaya (Google)